Dabley ku ordayey mooto oo qarax ka geystay Gaarisa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaarisa – Mareeg.com: Rag watay mooto xawaare ku socotay ayaa xalay bam gacmeed ku tuuray garaasha ku yaalla magaalada Gaarisa ee xarrunta gobolka Woqooyi Bari Kenya.
Hal qof ayaa ku dhintay, afar kalana way ku dhaawacmeen qaraxaas xalay ka dhacay magaalada Gaarisa, sida ay sheegeen goojoogayaal.
Madaxa waaxda dambi baarista (CID) ee gobolka waqooyi ee Kenya, Muse Yego ayaa u sheegay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi in dad aan la garaneyn ay wax loo maleynayo bambo ku tureen garaash ku yaalla magaalada.
Qof goob joog ahaa ayaa sheegay in tuhmanayaashu ay saarnaayeen mooto ku socotay xawaare sare marka ay bambada ku tuurayeen garaashka, wuxuuna intaas ku daray in dadka uu haleelay qaraxu ay yihiin shaqaalihii garaashka.
Ciidamada ammaanka ayaa Gaarisa ka wada howlgal baaritaan ah oo aan la sheegin cid lagu qabtay. Gaarisa ayaa horay loola beegsaday qaraxyo khasaare sababay oo u dambeeyey mid laba toddobaad ah ka dhacay oo ugu yaraan hal qof uu ku dhintay.